ချစ်သူလေးရွှေထူးအတွက် ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း | Duwun
တကယ်ကို ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်း။
ရွှေမှုန်ရတီတစ်ယောက် စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ချစ်သူဖြစ်သူ ရွှေထူးရဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့ ဆုတောင်းစကားတွေ အများကြီးပြောပြထားပါတယ်။
Photo: Shwe Mhone Yati Facebook
သရုပ်ဆောင် ရွှေမှုန်ရတီတစ်ယောက် သူ့ရဲ့ ချစ်သူလေး အဆိုတော် ရွှေထူးရဲ့ အသက် ၂၆ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ ဆုတောင်းလေးကို အခုလို ပြောပြထားပါတယ်။ ရွှေထူးကတော့ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့ (ဒီနေ့) မှာပဲ အသက် ၂၆ နှစ်ပြည့် တာဖြစ်ပါတယ်။
''For my birthday boy ကယ် အသည်းနှလုံး မွေးနေ့မှစ၍ ပိုပြီး စိတ်ချမ်းသာပါစေ။ ကျန်းမာရေး ပိုကောင်းပါစေ။ ပရိသတ်တွေပိုချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်လေး ဖြစ်ပါစေ။ မိဘကိုလဲ ဒီထက်မက စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားနိုင်ပါစေ။ မိဘကိုဒီထက်ပိုရှာကျွေးနိုင်ပါစေ ။ သဲကိုလဲ ပိုချစ် နိုင်ပါစေ ။ မိသားစု၊ ပရိသတ် ပြီးရင် အချစ်ဆုံးက သဲပဲဖြစ်ပါရစေ။ ပိုဂရုစိုက်နိုင်ပါစေ ဒီထက်ပိုချော့နိုင်ပါစေ။ '' လို့ ဆိုပါတယ်။
သနပ်ခါးလေးတွေနဲ့ လှနေတဲ့ ရွှေထူးနဲ့ ရွှေမှုံရတီ
ရွှေမှုန်ရတီနဲ့ ရွှေထူးကတော့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲလေး ဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။ ချစ်လွန်းလို့လည်း သဝန် တိုကြတယ် ထင်ပါတယ်။ ရွှေမှုန်ရတီကတော့ သဝန်တိုတာလေး လျှော့ပေးဖို့ ဆက်လက် ပြောပြထားပါသေးတယ်။
''သဝန်တို တာလေးလဲ လျော့နိုင်ပါစေ။ လို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ အများကြီးလဲချစ်တယ်။ ဒီထက်ပို ချစ်နိုင်အောင်လဲ ကြိုးစား နေပါ တယ်။ haveahappy day my babe . i'll always be with u babe . happy birhtday to u, happy birthday dear babe happy birth day to u'' ဆိုပြီးတော့ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ မနက် ၉ နာရီ ၄၉ မိနစ်က ရွှေမှုန်ရတီရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ရေးသားခဲ့ တာဖြစ် ပါတယ်။
ရွှေထူးဟာ ရွှေမှုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူခံစားရတဲ့ ခံစားချက်တချို့ကိုလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Anniversary တုန်းက အင်စတာဂရမ်ကနေ ပြောပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
"သူပျော်ရင်ကျွန်တော်ပျော်တယ် ။ သူစိတ်ညစ်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ညစ်တယ် ။ကျွန်တော်အဖြူစင်ဆုံးရိုးသားစွာသူမကိုပြောပြချင်တယ် ။ ချစ်တယ်။ အရမ်းချစ်မိသွားတယ် ။အချစ်ကထူးဆန်းတယ် သူပစ်သွားမယ်ဆိုလည်းချစ်တယ်။ သူမချစ်တော့လည်းချစ်မယ် ။အဲ့တာ ကျွန်တော့် ရဲ့အချစ်ပဲ ကျွန်တော်အတွက်ဘာမှမလိုဘူးသူပျော်ရွှင်နေဖို့ပဲလိုတယ်။သူပြုံးလိုက်ရင်ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ် Happy Anniversary ပါစာကလေး"ဆိုပြီး ရွှေထူးရဲ့ အင်စတာဂရမ်မှာ စက်တင်ဘာ(၆)ရက်နေ့က ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
အနုပညာပျိုးခင်း (၁) ရဲ့ စင်တင်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ ရွှေမှုံရတီဟာ အနုပညာလောကကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်ကျော်က တည်းက သရုပ်ဆောင်ကောင်းသူအဖြစ် နာမည်ရလာသူဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်အဖြစ် ရပ်တည်နေပါတယ်။ ရွှေထူးကလည်း လက်ရှိမှာ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။